साँघुरो कार्यालय, करदातालाई सास्ती : साँघुरो कार्यालय, करदातालाई सास्ती :
२ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४९ । काठमाडाैं
राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगका करदातालाई सहज हुने गरी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको जोरपाटीमा खोलिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्थान अभावका कारण करदाताले सास्ती भोग्नुपरेको छ । यस क्षेत्रका काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १ देखि ६ सम्म र शङ्खरापुर नगरपालिकाका २४ हजारभन्दा बढी करदाताका लागि गत भदौ १ गतेदेखि जोरपाटीमा कार्यालय खोलिएको थियो । कार्यालय भाडामा लिँदा मूल सडकको भवनको तेस्रो तलामा लिइएको छ । यस्ता कार्यालय भित्री सडकमा खुला स्थान बढी भएका ठाउँमा लिने व्यवस्था मिलाउन सेवाग्राहीले माग गरेका छन् ।
साँघुरो भ¥याङमा करदाता लाम लाग्ने र माथिल्लो तलामा रहेका कार्यालय एवं व्यावसायिक फर्ममा जानेहरुको दोहोरो आवतजावतले कोरोना सङ्क्रमण हुने भय रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. १ बाट कर तिर्न लाममा बस्नुभएका श्यामबहादुर तामाङले गुनासो गरे । विभागले उपयुक्त स्थानमा कार्यालय नराख्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउनुपरेको लाममा बसेकाहरुको भनाइ छ ।
कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत राजुप्रसाद प्याकुरेल कोरोनाका कारण यसअघि करदाता कर तिर्न आउन नसकेकाले खुला भएका बेला भीड बढी भएको बताउनुहुन्छ । करदाताले अनलाइनबाट नै धेरै काम गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरे पनि त्यस विषयमा जान्न नचाहेकाले समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । विभागले मासिक तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी जोरपाटीको मूल सडकमा रहेको तेज चौतारी मलमा कार्यालय लिएको छ ।